पीवीसी हावा उडाउने ढाँचा
पीवीसी हावा उडाउने मोल्ड
पीवीसी एयर ब्लो स्यान्डल चप्पल एकमात्र जुत्ता मोल्ड
PCU एयर ब्लो स्यान्डल स्लिपर मोल्ड
प्रक्रिया सिद्धान्त glassblowing को विचार बाट आउँछ। Enoch Ferngren र विलियम Kopitke एक झटका मोल्डिंग मिसिन उत्पादन र १ 38 ३ in मा हार्टफोर्ड साम्राज्य कम्पनी लाई बेचे। यो व्यावसायिक झटका मोल्डिंग प्रक्रिया को शुरुवात थियो। १ 40 ४० को दशक को दौरान विविधता र उत्पादनहरु को संख्या अझै पनी धेरै सीमित थियो र यसैले झटका मोल्डिंग पछि बन्द छैन। एक पटक विविधता र उत्पादन दरहरु उत्पादनहरु को संख्या चाँडै पछी बनाईएको मा गए।
खोकी शरीर workpieces ब्लोइ technique प्रविधि को उपयोग गर्न को लागी आवश्यक प्राविधिक संयन्त्र धेरै चाँडै स्थापित गरीएको थियो। किनकि गिलास धेरै टुटेको छ, प्लास्टिक को परिचय पछि, प्लास्टिक को उपयोग गरीएको थियो केहि अवस्थामा गिलास प्रतिस्थापन गर्न को लागी। १ 39 ३ in मा प्लाष्टिकको बोतलको पहिलो ठूलो उत्पादन अमेरिकामा गरिएको थियो। जर्मनीले यो टेक्नोलोजी अलि पछि प्रयोग गर्न थाल्यो, तर हाल झटका मोल्डिंग मेसिनहरुको अग्रणी निर्माताहरु मध्ये एक हो।
संयुक्त राज्य को शीतल पेय उद्योग मा, प्लास्टिक कन्टेनर को संख्या १7zero मा शून्य बाट १ 1999 मा १० बिलियन टुक्रा सम्म पुग्यो। आज, उत्पादनहरु को एक धेरै ठूलो संख्या मा उडाईएको छ र यो बढ्दो रहने आशा गरिन्छ।
अनाकार धातुहरु को लागी, थोक धातु चश्मा को रूप मा पनि जानिन्छ, झटका मोल्डिंग हालै दबाव र प्लास्टिक झटका मोल्डिंग संग तुलना तापमान मा प्रदर्शन गरीएको छ।
ब्लो मोल्डिंग (वा मोल्डिंग) गठन र एक साथ खाली प्लास्टिक भागहरु मा सामेल हुन को लागी एक निर्माण प्रक्रिया हो। यो पनि गिलास को बोतलहरु वा अन्य खोक्रो आकारहरु को लागी प्रयोग गरीन्छ।
सामान्य मा, त्यहाँ झटका मोल्डिंग को तीन मुख्य प्रकार छन्: निकासी झटका मोल्डिंग, इंजेक्शन झटका मोल्डिंग, र इंजेक्शन खिंचाव झटका मोल्डिंग।
झटका मोल्डिंग प्रक्रिया तल प्लास्टिक पिघल र एक parison मा गठन, वा इंजेक्शन र इंजेक्शन खिंचाव झटका मोल्डिंग को मामला मा, एक preform संग शुरू हुन्छ। Parison प्लास्टिक को एक ट्यूब जस्तै टुक्रा एक छेउमा जसको माध्यम बाट संकुचित हावा पारित गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि parison एक मोल्ड मा clamped छ र हावा यो मा उडाएको छ। हावा को दबाव तब मोल्ड संग मेल गर्न प्लास्टिक बाहिर धक्का। एक पटक प्लास्टिक चिसो र कडा छ मोल्ड खुल्छ र भाग बाहिर निकालीन्छ। पानी च्यानलहरु ढाँचामा ठण्डा मा सहयोग को लागी नक्काशी गरीएको छ।
1. इंजेक्शन खिंचाव झटका मोल्डिंग
इंजेक्शन खिंचाव झटका मोल्डिंग टेक्नोलोजी वर्तमान मा अधिक व्यापक रूप मा इंजेक्शन झटका मोल्डिंग को तुलना मा प्रयोग गरीन्छ। यो झटका मोल्डिंग विधि वास्तव मा इंजेक्शन झटका मोल्डिंग हो, तर अक्ष खींच को वृद्धि संग, झटका मोल्डिंग सजिलो छ र ऊर्जा को खपत कम छ।
चाहे यो इंजेक्शन झटका मोल्डिंग हो, इंजेक्शन स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग, वा एक्सट्रूज़न स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग हो, यो एक समय मोल्डिंग र दुई पटक मोल्डिंग प्रक्रियाहरु मा विभाजित छ। एक समय मोल्डिंग विधि स्वचालन को एक उच्च डिग्री छ, parison clamping र अनुक्रमणिका प्रणाली उच्च परिशुद्धता को आवश्यकता छ, र उपकरण लागत उच्च। सामान्यतया, धेरै निर्माताहरु डबल मोल्डिंग विधि को उपयोग गर्दछ, त्यो हो, parison इंजेक्शन वा निकासी द्वारा बनाईएको हो, र त्यसपछि parison अर्को उत्पादन (इंजेक्शन झटका मेसिन वा इंजेक्शन स्ट्रेच ब्लो मेशिन) मा समाप्त उत्पादन उडाउन को लागी राखिएको छ, र उत्पादन दक्षता उच्च छ।
2. बाहिर निकाल्ने झटका मोल्डिंग
बाहिर निकाल्ने झटका मोल्डिंग झटका मोल्डिंग मा सबै भन्दा व्यापक रूप मा प्रयोग झटका मोल्डिंग विधिहरु मध्ये एक हो। यो एक विस्तृत श्रृंखला मा प्रशोधन गर्न सकिन्छ, साना उत्पादनहरु बाट ठूला कन्टेनर र अटो पार्ट्स, एयरोस्पेस रासायनिक उत्पादनहरु, आदि को लागी।
3. इंजेक्शन झटका मोल्डिंग:
इंजेक्शन झटका मोल्डिंग एक मोल्डिंग विधि हो कि इंजेक्शन मोल्डिंग र झटका मोल्डिंग को विशेषताहरु लाई जोड्दछ। वर्तमान मा, यो मुख्य रूप मा पेय बोतलहरु र औषधि बोतलहरु को लागी उच्च उड्ने सटीकता आवश्यकताहरु, साथै केहि साना संरचनात्मक भागहरु को लागी प्रयोग गरीन्छ।
आकार मोड Pvc Pcu जुत्ता मोल्ड
मोल्ड नाम: पीवीसी PCU एयर BLOW जूता स्यान्डल स्लिपर एकल मोल्ड
जुत्ता मेसिन: पीवीसी AIRBLOW मशीन
अघिल्लो: पु मोल्ड
अर्को: पीवीसी क्रिस्टल मोल्ड
पीवीसी एयर ब्लोइ मोल्ड
पीवीसी जाली मोल्डिंग
पीवीसी पेभर मोल्ड्स
पीवीसी शेल्फ किनारा मोल्डिंग
ईवा विशेष मोल्ड